လှိုင်သာယာ ၁၄ ရပ်ကွက်က အသုဘ မဏ္ဍပ်မရှိ သဂြိုလ်စရာ BODY မရှိ တဲ့ (၉) တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး – GaMone Media
Homepage / Local News / လှိုင်သာယာ ၁၄ ရပ်ကွက်က အသုဘ မဏ္ဍပ်မရှိ သဂြိုလ်စရာ BODY မရှိ တဲ့ (၉) တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
လှိုင်သာယာ ၁၄ ရပ်ကွက်က အသုဘ မဏ္ဍပ်မရှိ သဂြိုလ်စရာ BODY မရှိ တဲ့ (၉) တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
By Ga MonePosted on March 17, 2021
၉တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမောင် ကြယ်စင်ဟိန်း(ခေါ်) ကြယ်ကြယ် လှိုင်သာယာ၁၄ရပ်ကွက် မေခလမ်း နေပါတယ် မောင်လေးက အရမ်းလိမ်မာတယ် ၇တန်းထဲက နွေရာသီဆိုကျောင်းပိတ်ရင် မိဘကို ကူညီဖို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ရတယ် မောင်လေးက အရမ်းလိမ်မာတ ဆန္ဒတွေ့ပြထဲက သူကရှေ့ဆုံးက ဆန္ဒပြရတာ မြောက်ဥက္ကလာ ဘက်မှာကြမ်းနေp လှိုင်သာယာ လူတွေ့ ကူညီဖို့ ခေါတာ့ သူတို့အဖွဲ့သွားကြတယ် ၅ထိပ်မှာ ပိတ်နေလို့ပြန်ရတယ် ဟိုဘက်လိုက်ကင်းစောင့်ဒီဘက်လိုက်ကင်းစောင့် အိမ်တောင်ပြန်မကပ်ရဘူး မောင်လေးက 14.3.2021 မနက် စောစောက အိမ်ကထွက်သွားပါတယ် သူကနေတိုင်းဒိုင်ကာအဖွဲ့တွေ့အမြဲပါပါတယ်
စပစ်ချိန်တွင် မောင်လေးအရှေ့က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထိသွားလို့ မောင်လေးက သွားသယ် တာ မောင်လေးကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းကိုပစ်သွားတာ ဦးနှောက်ပွင့်သွားပါတယ်။သူငယ်ချင်းက မောင်လေး ကို သယ်ချိန်တောင် မရလောက်ပါဘူး စစ်သားများက ဆက်တိုက်ပစ်နေလို့ မောင်လေးကို မသယ်ခဲ့ရပါဘူးစစ်သားများ မောင်လေးကို ဆွဲသွားပါတယ် ဘယ်သူမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နေနေသာသာ ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရဘူး ဘာမှ မပြောပဲ ကားပေါ် ကဆင်းထဲက ဆက်တိုက်ပစ်တာပါ ၁ထိပ် ဘက်ကနေ BOCဘက် အထိ နှစ်ဖက်ဝိုင်းပစ်ကြတာပါ ဘယ် mediaမှ ဘာသံမကြားရဘူး အကုန်မှောင်ချထားတယ် ရင်နာတယ် သေတဲ့ အလောင်းကိုတောငိပြန်မရဘူး သချိုင်း စရာအလောင်းမရှိ
နောက်ဆုံးခရီးမှာ အလောင်းမရှိဘူးအသက် ၁၆နာမည် မောင်ကြယ်စင်ဟိန်း ကျဆုံးသောနေ့ 14.3.2021 ဆိုတဲ့ အသုဘစာရွကိတောင်မလုပ်ရတဲ့အသုဘ သချိုင်းစရာမရှိတဲ့အလောင်းမောင်လေးကိုကူညီချင်သူများကပြောထားလို့ကလေးကို ရင်နာတယ်မောင်လေးရေ နာရေးအိမ်တဲ့ နာရေးမဏ္ဍပ်မရှိ၊ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမဲ့သူမရှိ၊မဏ္ဍထိုးဖို့ပြောတော့ ကူညီမဲ့သူတွေ့မရှိ ရင်နာတယ် မောင်လေးရေ ကျောင်းတွေ့ဖွင့်ပြီး သား ၉တန်းအောင်pရင် ၁၀တန်းတတ်ရတော့မယ်အမရေ အမသားဂုဏ်ထူးပါအောင်ဖြေပြမယ်ကြည့်နေတဲ့ သား၁၀တန်းpရင်အဖေကို အလုပ်နားခိုင်းမယ်တဲ့ အဖေက နေသိပ်မကောင်းဘူးတဲ့ လိမ်မာတာမောင်လေးရယ် အိမ်ကိုလာရင်အမရေအဖေဘာခိုင်းလို့ ပစ္စည်းလေလာယူတာ ပြုံးp ပြောရတာအမော အိမ်ကများ မုန့်လေဝယ်ကျွေးရင် မစားရက်ဘူး အိမ်မှာအမေကိုကျွေးချင်လို့တဲ့မစားဘူး ရင်နာတယ်ကလေးရာအမေဖစ်သူကငါ့သားလေပြန်လာမှာတဲ့ ဆေး ကျောင်းသားလဲအသက်နဲ့ပါ အင်ဂျင်နီယာလဲအသက်နဲ့ ၉တန်းကျောင်းလေလဲအသက်နဲ့ပါ ဆင်းရဲလို့တော့ကလေးကိုပစ်မထားကြပါနဲ့ ဆုံးသွားတာသိပါရဲ့နဲ့ အလောင်းပြန်မရတာ သချိုင်းစရာမရှိလို့ ရင်နာနာနဲ့အိမ်မှာပဲ မြေဆွမ်းသပိတ်သွတ်ပေးရတယ် အသက် ၁၆နာမည် မောင်ကြယ်စင်ဟိန်း ကျဆုံးသောနေ့ 14.3.2021 ဆိုတဲ့ အသုဘစာရွကိတောင်မလုပ်ရတဲ့အသုဘ သချိုင်းစရာမရှိတဲ့အလောင်း ကျမတောင်ရင်တွေ့ကွဲရင် မောင်လေးမိဘတွေ့ဘယ်လောက်တောင် ရင်ကွဲလိုက်မလဲကလေးရယ်မောင်လေးကိုကူညီချင်သူများကပြောထားလို့ အလှူငွေထည့်ချင်လို့ပါက AYA acc 0117201010098193 KBZ acc 23030123002334801 Wave. 09986142818 Ph ဆက်သွယ်ရန် 09986142818
၉တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးရဲ႕ေနာက္ဆုံးခရီးေမာင္ ၾကယ္စင္ဟိန္း(ေခၚ) ၾကယ္ၾကယ္ လႈိင္သာယာ၁၄ရပ္ကြက္ ေမခလမ္း ေနပါတယ္ ေမာင္ေလးက အရမ္းလိမ္မာတယ္ ၇တန္းထဲက ေႏြရာသီဆိုေက်ာင္းပိတ္ရင္ မိဘကို ကူညီဖို႔ ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္ မွာ အလုပ္ဝင္လုပ္ရတယ္ ေမာင္ေလးက အရမ္းလိမ္မာတ ဆႏၵေတြ႕ျပထဲက သူကေရွ႕ဆုံးက ဆႏၵျပရတာ ေျမာက္ဥကၠလာ ဘက္မွာၾကမ္းေနp လႈိင္သာယာ လူေတြ႕ ကူညီဖို႔ ေခါတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕သြားၾကတယ္ ၅ထိပ္မွာ ပိတ္ေနလို႔ျပန္ရတယ္ ဟိုဘက္လိုက္ကင္းေစာင့္ဒီဘက္လိုက္ကင္းေစာင့္ အိမ္ေတာင္ျပန္မကပ္ရဘူး ေမာင္ေလးက 14.3.2021 မနက္ ေစာေစာက အိမ္ကထြက္သြားပါတယ္ သူကေနတိုင္းဒိုင္ကာအဖြဲ႕ေတြ႕အၿမဲပါပါတယ္
စပစ္ခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေလးအေရွ႕က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ထိသြားလို႔ ေမာင္ေလးက သြားသယ္ တာ ေမာင္ေလးကို ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းကိုပစ္သြားတာ ဦးေႏွာက္ပြင့္သြားပါတယ္။သူငယ္ခ်င္းက ေမာင္ေလး ကို သယ္ခ်ိန္ေတာင္ မရေလာက္ပါဘူး စစ္သားမ်ားက ဆက္တိုက္ပစ္ေနလို႔ ေမာင္ေလးကို မသယ္ခဲ့ရပါဘူးစစ္သားမ်ား ေမာင္ေလးကို ဆြဲသြားပါတယ္ ဘယ္သူမွ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ဖို႔ေနေနသာသာ ဘာမွ မလုပ္လိုက္ရဘူး ဘာမွ မေျပာပဲ ကားေပၚ ကဆင္းထဲက ဆက္တိုက္ပစ္တာပါ ၁ထိပ္ ဘက္ကေန BOCဘက္ အထိ ႏွစ္ဖက္ဝိုင္းပစ္ၾကတာပါ ဘယ္ mediaမွ ဘာသံမၾကားရဘူး အကုန္ေမွာင္ခ်ထားတယ္ ရင္နာတယ္ ေသတဲ့ အေလာင္းကိုေတာငိျပန္မရဘူး သခ်ိဳင္း စရာအေလာင္းမရွိ
ေနာက္ဆုံးခရီးမွာ အေလာင္းမရွိဘူးအသက္ ၁၆နာမည္ ေမာင္ၾကယ္စင္ဟိန္း က်ဆုံးေသာေန႔ 14.3.2021 ဆိုတဲ့ အသုဘစာ႐ြကိေတာင္မလုပ္ရတဲ့အသုဘ သခ်ိဳင္းစရာမရွိတဲ့အေလာင္းေမာင္ေလးကိုကူညီခ်င္သူမ်ားကေျပာထားလို႔ကေလးကို ရင္နာတယ္ေမာင္ေလးေရ နာေရးအိမ္တဲ့ နာေရးမ႑ပ္မရွိ၊ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးမဲ့သူမရွိ၊မ႑ထိုးဖို႔ေျပာေတာ့ ကူညီမဲ့သူေတြ႕မရွိ ရင္နာတယ္ ေမာင္ေလးေရ ေက်ာင္းေတြ႕ဖြင့္ၿပီး သား ၉တန္းေအာင္pရင္ ၁၀တန္းတတ္ရေတာ့မယ္အမေရ အမသားဂုဏ္ထူးပါေအာင္ေျဖျပမယ္ၾကည့္ေနတဲ့ သား၁၀တန္းpရင္အေဖကို အလုပ္နားခိုင္းမယ္တဲ့ အေဖက ေနသိပ္မေကာင္းဘူးတဲ့ လိမ္မာတာေမာင္ေလးရယ္ အိမ္ကိုလာရင္အမေရအေဖဘာခိုင္းလို႔ ပစၥည္းေလလာယူတာ ၿပဳံးp ေျပာရတာအေမာ အိမ္ကမ်ား မုန႔္ေလဝယ္ေကြၽးရင္ မစားရက္ဘူး အိမ္မွာအေမကိုေကြၽးခ်င္လို႔တဲ့မစားဘူး ရင္နာတယ္ကေလးရာအေမဖစ္သူကငါ့သားေလျပန္လာမွာတဲ့ ေဆး ေက်ာင္းသားလဲအသက္နဲ႔ပါ အင္ဂ်င္နီယာလဲအသက္နဲ႔ ၉တန္းေက်ာင္းေလလဲအသက္နဲ႔ပါ ဆင္းရဲလို႔ေတာ့ကေလးကိုပစ္မထားၾကပါနဲ႔ ဆုံးသြားတာသိပါရဲ႕နဲ႔ အေလာင္းျပန္မရတာ သခ်ိဳင္းစရာမရွိလို႔ ရင္နာနာနဲ႔အိမ္မွာပဲ ေျမဆြမ္းသပိတ္သြတ္ေပးရတယ္ အသက္ ၁၆နာမည္ ေမာင္ၾကယ္စင္ဟိန္း က်ဆုံးေသာေန႔ 14.3.2021 ဆိုတဲ့ အသုဘစာ႐ြကိေတာင္မလုပ္ရတဲ့အသုဘ သခ်ိဳင္းစရာမရွိတဲ့အေလာင္း က်မေတာင္ရင္ေတြ႕ကြဲရင္ ေမာင္ေလးမိဘေတြ႕ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရင္ကြဲလိုက္မလဲကေလးရယ္ေမာင္ေလးကိုကူညီခ်င္သူမ်ားကေျပာထားလို႔ အလႉေငြထည့္ခ်င္လို႔ပါက AYA acc 0117201010098193 KBZ acc 23030123002334801 Wave. 09986142818 Ph ဆက္သြယ္ရန္ 09986142818
နောက် (၂၄)နာရီ အတွင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် မစုစုစံ ရဲ့ မိုးကြီးရေလျှံ ခန့်မှန်းချက်
Previous post အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်း ရဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ နဲ့ အိပ်ယာပေါ်က ပုံတွေ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ မင်းသမီး မယ်လိုဒီ
Next post (၇)ရက် သား သမီး ပြည်သူ တွေ အတွက် တတ်နိုင်သ လောက် လှူဒါန်း မှုတွေ ပြု လုပ်နေ တဲ့ အဆိုတော်မနော